Ubhaliso lweMelBet-Ezemidlalo, Kwiimarike, I-Mel Bet APP kunye neebhonasi ngo-2021
UMelbet – Uphengululo oluthembekileyo lweNcwadi ePhambili
IMelbet isekwe kwi-2012 kwaye yeyabanini bakwa-Alenesro Ltd., kunye nebhukumeyikha ehloniphekileyo etsala abathengi kuluhlu lwayo olubanzi lweemarike kwimidlalo emininzi kunye nobunzima bayo. Amalungu eMelbet aya kuba nakho ukusebenzisa ezinye iimveliso ezininzi zenkampani, njengekhasino kunye nendawo yebhingo, Ngelixa zininzi iibhonasi kunye nokunyuselwa ukuze basebenzise ithuba. Kolu hlaziyo, Siza kugubungela konke okufuneka ukwazi ngencwadi yezemidlalo ukuze wazi ukuba ulindele ntoni.
Ikhonkco elahlukileyo leMelbet
Ubhaliso lweMelbet lukhawuleza kwaye lulula
UMelbet unika abathengi abatsha iindlela ezintathu zokubhalisa kwiakhawunti, nganye ikhawuleza kwaye ilula, kwaye wonke umntu uqinisekile ukufumana ubuncinci enye abonwabileyo ukuyisebenzisa.
Olona khetho lukhawulezayo kukubhaliswa "ngokucofa kanye". Konke okufuneka ukwenze kukukhetha ilizwe lakho kunye nemali oyithandayo kwaye ucofe ku "Bhalisa". Indawo leyo ivelisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, Kubalulekile ukwenza irekhodi, kwaye iakhawunti ilungele ukusetyenziswa. Ungaqhubeka ngqo wenze idiphozithi, usebenzisa enye yeendlela zokuhlawula ezingama-50, kwaye ubange ibhonasi yakho yokwamkela.
100% Ibhonasi Ukuya kuthi ga € 100
Unokusebenzisa indlela yesiqhelo yokubhalisa usebenzisa idilesi ye-imeyile. Gcwalisa nje ifom, Ukubonelela ngeenkcukacha ezisisiseko njengawe apho uhlala khona kunye neenkcukacha zakho zonxibelelwano, khetha igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, kwaye ucofe ku "Bhalisa". Ekugqibeleni, Bayakuvumela ukuba ubhalise ngokukhawuleza usebenzisa iinethiwekhi ezahlukeneyo kunye neenkonzo zemiyalezo, oko kukuthi: VK, uphando, Odnoklassniki, Imeyile.ru, IYandex, kunye neTelegram.
Nokuba yeyiphi indlela oyikhethayo, akhawunti yakho iya kwenziwa ngemizuzwana kwaye uya kuba nako ukubheja ngaphakathi imizuzu.
Ibhonasi ye MELBet – Ukubheja kwezemidlalo kunye neebhonasi zekhasino
Iibhonasi zeMelbet zixabiseke kakhulu kwimali kwaye zininzi zazo eziza kuzisebenzisa, kanye okoko ukujoyina. Onke amalungu amatsha anikwa ibhonasi yedipozithi yokuqala yokuwanceda aqalise, ubungakanani ngqo obuya kuxhomekeka kwilizwe lakho nakwimali ekhethiweyo. Umzekelo, Abantu baseKhanada banokubanga i-100% yebhonasi ukuya kuthi ga kwi-150 yeedola kunye nedipozithi yokuqala ye- $ 1 ubuncinci.
Imali yebhonasi ifakwe ngokuzenzekelayo kwidiphozithi yokuqala, ke yazi ukuba kufuneka ukhethe ukuphuma kuyo ukuba awuyifuni. Kuza kunye neemfuno zokubheja ezifanelekileyo. Ibhonasi kufuneka ibhejelwe izihlandlo ezihlanu kwiibhetri zokuqokelela. Ubhejo ngalunye lwezihlanganisi kufuneka lubandakanye ubuncinci kwimisitho emithathu, kwaye ubuncinci iminyhadala emithathu kufuneka ibe nokungalingani kwe-1.40 okanye ngaphezulu. Ezi mfuno kufuneka zifezekiswe ngokupheleleyo phambi kokuba urhoxe. Ngapha koko, abathengi mabagqibe inkqubo ye-KYC (Yazi uMthengi wakho) kwaye uqinisekise isazisi. Ke ngoko, kubalulekile ukuba usebenzise iinkcukacha zokwenyani xa usenza iakhawunti.
Amalungu aya kuthi emva koko abe nakho ukuthatha ithuba ngeebhonasi ezininzi kunye nokunyuselwa. Njengokuba, kuhlala kukho ukubonelelwa okukhethekileyo kwiibhengezo zokuqokelela, ngakumbi xa kusenzeka imisitho emikhulu, njenge tumente yebhola ekhatywayo. Zininzi kwakhona ithuba lokonwabela ukubuyiselwa kwemali, ukuqhubekeka iibhonasi, amathuba okunyusa, kwaye nangokunjalo. Ngokuqinisekileyo kufanelekile ukugcina iliso lisondele kwiphepha lokunyusa iMelbet ukuqinisekisa ukuba awuphoswa.
IMelBet kwiselfowuni – Ukubheja ngokulula ekuhambeni
Abo bahlala bebheja rhoqo kwii-smartphones zabo okanye kwizixhobo zeethebhulethi baya konwaba ukuva ukuba oku kulula kakhulu njengelungu leMelbet. Iinketho zeselfowuni zikaMelbet zibandakanya iwebhusayithi enobuntu ephathekayo kunye neeapps ezinikezelweyo kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android. Zonke ezi ndlela zintathu zikunika ukufikelela okupheleleyo kuyo yonke into ekufuneka inikezwe yile ncwadi yezemidlalo ngokuthepha nje ezimbalwa kwiscreen sakho.
Oku kuthetha ukuba ngaphakathi kwemizuzwana ungasebenzisa amawaka eemarike zokubheja ekunikezelweni, yongeza ukubheja kwisiliphu sakho sokubheja kwaye ubeke ukubheja. Unokwenza nezinye izibonelelo zoncedo zesiza, ezinje ngamanani kunye neziphumo zembali, kwaye ngokuqinisekileyo iimeko eziphilayo. Oku kuthetha ukuba xa ubukele umsitho, ungabeka indawo yokudlala ngokukhawuleza nangokulula, kwaye usebenzise nawaphi na amathuba okubheja onokuwabona.
Ngokubalulekileyo, akukho mfuneko yokuseta iakhawunti eyahlukileyo yokubheja. Ungangena ngemvume usebenzisa iziqinisekiso zakho eziqhelekileyo kwaye uya kuba nokufikelela kwangoko kuyo yonke into enikezelwa yiakhawunti yakho, njengemali yakho. Uya kuba nakho ukufaka idipozithi kwaye urhoxe ngokulula, kwaye ngamanye amaxesha unokufumana izibonelelo zebhonasi ezikhethekileyo zabathengisi abahambahambayo.
Ekugqibeleni, Nokuba ukhetha ukusebenzisa usetyenziso lweselfowuni okanye iwebhusayithi ehambayo iya kuza kukhetho lwakho. Zombini zibonelela ngokufikelela kuluhlu olufanayo lweempawu kwaye zombini zenziwe kakuhle kakhulu kwaye ziyasebenziseka, nokuba usebenzisa iscreen esincinci. Iiapps zinokubonelela ngokufikelela kancinci kodwa ziya kusebenzisa indawo yokugcina. Zombini zivumela inqanaba elithile lokwenza ngokwezifiso, Njengokubonisa isiliphu sokubheja emazantsi kwesikrini ngawo onke amaxesha kwaye yeyiphi indlela esetyenziswayo esetyenziswayo, kuthetha ukuba uya kuba nakho ukuhlengahlengisa amava kwizinto ozikhethayo.
Ubuninzi beMakethe yokuBheja kuyo yonke iMidlalo enokuCingwa
Ukugquma kwezemidlalo kunye neemarike kugqamile. Ngalo naliphi na ixesha, Uya kubona ukuba banikezela ngeemarike kumawakawaka ezinto ezenzeka kwihlabathi liphela. Kubonakala ngathi akukho midlalo okanye iligi ifihlakele kakhulu kubhuki kwaye iphuma kwindlela yayo yokubonelela ngazo zonke iimarike umntu anokuzifuna.. Imidlalo egutyungelweyo ibandakanya:
Nokuba ngowuphi umdlalo obheja kuwo, Nokuba ngumdlalo webhola ekhatywayo okanye into engaziwayo, njengebhola lebhola, kusenokwenzeka ukuba iligi ethile kunye nomsitho onomdla kuwo uyafumaneka. UMelbet ugubungela iziganeko kwihlabathi liphela, kwaye ayisiyiyo kuphela iiligi eziphambili kunye neetumente, njenge-NBA okanye i-English Premier League. Ngumdlalo onomtsalane kakhulu kwaye bonke abo babhejeli baqinisekile ukuba bayawuxabisa.
Ikwayimeko efanayo ngokubhekisele kuluhlu lweemarike ezikhoyo. Uya kufumana okuninzi kunikezelo kunokubheja kweemali ezisisiseko. Inyaniso, Akuqhelekanga ukufumana amakhulu eemarike ezikhoyo kwimicimbi emikhulu. Oku kuya kubandakanya ukubheja okupheleleyo, Iziphene, Inqaku, kunye nobunzima bokubheja kwezindululo zomdlali / weqela. Kukho iimarike ezininzi ngokuthe ngqo kwiitumente nakwiligi, kwaye kunjalo kwimakethi yokudlala. Phakathi kwabo bonke, Uqinisekile ukufumana ubhejo ukuba ukhangela.
Ukuba unomdla kwiimarike ngqo, ke kufanelekile ukuba ujonge icandelo 'leBets zeXesha elide'. Njengoko igama libonisa, ezi ziimarike kwimisitho eyenzeka ngamanye amaxesha kwixa elizayo, njengeNdebe yeHlabathi yeFIFA elandelayo okanye iiOlimpiki ezilandelayo. Ngamanye amazwi, UMelbet unayo yonke into enomdla wokubheja kwezemidlalo anokuyifuna.
Kukude ngakumbi ukufumanisa
Njengelungu leMelbet kuninzi kakhulu onokukufumanisa kwiwebhusayithi. Umzekelo, iMelbet Casino likhaya lamawaka emidlalo kubaphuhlisi abaninzi abaphezulu abanjengoNetent, iSoftBet, kunye nePragmatic Play. Kukho umthengisi wekhasino omangalisayo ophilayo oxhotyiswe ngabanikezeli abaninzi kubandakanya i-Evolution, Ukunyaniseka kweMidlalo, kunye no-Ezugi, Ukuqinisekisa ukuba kukho into yazo zonke iinkalo. Abo bonwabela umdlalo wesitayile se-arcade baya kuyithanda indawo yeMelbet ekhawulezayo yeMidlalo. Igcwele imidlalo eqhelekileyo, njengamakhadi okuqala kunye nemidlalo yedayisi enokunika iiyure zokuzonwabisa.
Kukho indawo yebhingo epheleleyo apho imidlalo yenzeka khona yonke imizuzu embalwa. Ungadlala ibhola engama-90, Ibhola engama-75, Ibhola yebhola engama-30 nangaphezulu. Kukwakho nemidlalo yeslingo, kunye nemidlalo yebhingo yomdlali omnye onokuyiqala nanini na ufuna. Amanye amachibi amabhaso makhulu kwaye amaxabiso etikiti ngokubanzi asezantsi kakhulu.
Ngokumangalisayo, kukho enye into onokuyifumana njenge-poker, Imidlalo yeTV, imidlalo ebonakalayo, kunye noToto. Kufuphi, akunandaba nokuba uluhlobo olunjani lokungcakaza, IMelbet ikhuselekile.
Ikhaya leNdalo labaHwebi bezeMidlalo
Isiphelo esona sigqibeleleyo se-Bookie Melbet kukuba sinayo yonke into onokuyifuna umbhejisi wezemidlalo. Akunakulindeleka ukuba incwadi yezemidlalo inganikezeli ngeemarike kwezemidlalo nakwiminyhadala onomdla wokubheja kuyo. Ngapha koko, amathuba amaninzi ahlala ngokukhululekile, kukunika ithuba lokuphumelela ngaphezulu. Ngaxeshanye, Ungazuza kwiibhonasi ezithile kunye nokunyuselwa, kwaye inkqubo yokubheja isebenziseka lula kakhulu. Njenge, Siyakholelwa ukuba uMelbet ngokuqinisekileyo ufanele ukujongwa ngokusondeleyo nangubani na okhangela indawo yokubhukisha entsha apho aza kubheja khona.